PSJTV | नायिका पुजा शर्माको महिनाको खर्च ९५ हजार के मा कति ?
शुक्रबार, १७ जेठ २०७६ पिएसजे न्युज
म अलि खर्चालु छु । बच्चैदेखि ड्रेसअप, मेकअप तथा खानपिनमा राम्रै खर्च हुन्छ । कलेज पढ्दा पनि प्रायः मैले नै साथीहरूलाई खाजा खुवाउँथेँ । त्यतिवेला बाबा–मम्मीले दिएको ‘पकेट मनी’बाटै काम चलाउनुपथ्र्याे । मलाई ‘धेरै खर्चालु छेस्’ भन्नुहुन्थ्यो । आफैँ कमाउन थालेपछि त खर्चको मात्रा झन् बढेको छ । महिनामा कति खर्च हुन्छ, ठ्याक्कै हिसाब राख्ने गरेकी छैन । तर, ८५ देखि ९५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । अत्यावश्यक काममा त पैसा खर्चनु नै प-यो नि !
खानपिनमा पनि राम्रै खर्च हुने गरेको छ । साथीहरूसँग कफी, खाजा खाइन्छ । रेस्टुरेन्ट नियमितजस्तै गइन्छ । त्यहाँको खर्च महिनामा १५ हजारजति हुन्छ । कतै घुम्न गइयो भने खर्च बढ्छ । तर, आफूले चाहेजसरी बाँच्न पुगिरहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
आइफोन ११ का तीन नयाँ मोडल आउँदै, यस्ता छन् सुविधा
काठमाडौं : नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) आबद्ध देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका राष्ट्रिय अध्यक्ष सिपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारविरुद्ध अर्को सशक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पुष्पलाल ...
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच फेरि विवाद भएको छ । मङ्गलबार वालुवाटारमा पूर्व एमालेका शीर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । ...